Midnight, Texas Season 1 – Burmese Subtitle Share
Original nameMidnight, Texas
Created byMonica Breen
StarringArielle Kebbel, Dylan Bruce, François Arnaud, Jason Lewis, Parisa Fitz-Henley, Peter Mensah
Synopsis of Midnight, Texas Season 1
Midnight Texas မြန်မာစာတန်းထိုး
BS ပရိတ်သတ်တွေထဲက တစ်ယောက်က လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်က အိမ်ကိုလာပြီးတော့ အကိုရေ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးလုပ်ပေးပါဦး အိမ်က Mi TV ကြီးနဲ့ကြည့်ချင်လို့ပါဆိုတာနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ Midnight Texas ဖြစ်နေတယ်
အဲ့ဒါနဲ့ trailer ကြည့်လိုက်တယ် မဆိုးဘူးပေါ့…
ပြီးတော့ အစအဆုံးဒေါင်းလိုက်တယ် အစ်မ La Won Pyae နဲ့ နီနီစိုး တို့က အားနေတာနဲ့ သူတို့ကိုဘာသာပြန်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်…
ထူးဆန်းစရာတွေလည်းပါတယ်… အံ့သြစရာတွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့… ကြည့်လို့ရှုလို့အရမ်းကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ
ဘာလို့ဒီလောက်တောင်ကောင်းနေပါလိမ့်လို့ imdb ကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်လိုက်တော့ rating က 7.5/10 ဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာမ Charlaine Harris Schulz ရဲ့ ၀တ္တုကို အခြေပြုပြီးတော့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ် ဒါနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ အဆုံးထိကြည့်ြ့ဖစ်သွားတယ်…. ဒါကြောင့် BS ဖန်တွေလည်းအတူတူကြည့်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Openload ကနေ ဖြစ်နိုင်ရင်မဒေါင်းကြပါနဲ့ မကောင်းလို့ပါ စောင်တောသားတွေကတော့ ဒေါင်းပါ
မြို့သားတွေကတော့ drive တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ဒေါင်းပါ….
ကွာလတီကလည်း 1080p ဖြစ်လို့ ဖုန်းအစုတ် 720p တွေမနိုင်ပါဘူး စက်ပူတယ်လို့ပြောပါတယ် ဟုတ်ပါတယ် ရိုက်ခွဲပစ်ပါ
ပြီးတော့ အခုအပိုင်းတွေက DTS Audio ဖြစ်လို့ ဖုန်းအစုတ်တွေ MX Player တစ်ချို့တွေမှာအဆင်မပြေပါဘူး Original ပါတဲ့ Player ဒါမှမဟုတ်ရင်
VLC Player ကိုနောက်ဆုံး Version ဒေါင်းပြီးကြည့်ပေးပါ ဒီနေရာတွင် စကားချပ်ပြီး၏။
သာမာန်ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေထက် ထူးခြားဆန်းပြားစွာနဲ့ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ Texas မြို့ရဲ့ ဝေးလံတဲ့နေရာမှာတည်ရှိပြီးတော့ လူသူအသွားအလာနည်းတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့မှာပါ။ အဆိုပါ မြို့လေးမှာတော့ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်တွေ၊ စုန်းမတွေကနေ စိတ္တဇ လူသတ်သမားတွေနဲ့ ကြေးစားလူသတ်သမားတွေ အထိပါ ကျင်လည်ကျက်စားနေထိုင်ကြပါတယ်။ ဒီလို လူတွေအတွက်တော့ မြို့လေးရဲ့ညသန်းခေါင်အချိန်ဟာ ဒုစရိုက်မှုတွေ ပြုလုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်ဘုံတစ်ခုလိုပါပဲ။ မြို့ထဲက တခြားအသင်းအဖွဲ့တွေဟာလဲ လမ်းသရဲဆိုင်ကယ်ဂိုဏ်းတွေ၊ အကျင့်ပျက်ရဲတွေနဲ့ အတိတ်က အန္တရာယ်အကျိုးဆက်တွေကို ရင်ဆိုင်တိုက်ထုတ်ဖို့အတွက် စည်းလုံးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဖွဲ့ခဲ့ကြပါတော့တယ်။
စိတ်တန်ခိုးစွမ်းအင်ကြီးမားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Manfred Bernardo ဟာ Texas ဆိုတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့မှာ ပုန်းကွယ်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ အဆိုပါမြို့ဟာ သာမာန်လူသားတွေအတွက်သာမက သဘာဝလွန်စွမ်းအင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေအတွက်ပါ ကောင်းကင်ဘုံကဲ့သို့ ခိုနားစရာနေရာလေးဖြစ်နေတာကို သိခဲ့ရပါတယ်
Manfred ဟာ သူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်းအသစ် အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာကိုပြဖို့အတွက် အသတ်ခံရသူနဲ့ ဆက်သွယ်မှုတစ်ချို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူက Manfred ရဲ့အိမ်မှာ ခြောက်လှန့်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဖယ်ရှားရာမှာ ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ Lem နဲ့ Olivia ဟာ သေစေနိုင်တဲ့ သားရဲတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကို နောက်ထပ်လူတွေကို ထပ်မသတ်နိုင်ခင်မှာ ရပ်တန့်ပစ်ဖို့လုပ်ရပါတော့တယ်။
Vampires တွေဟာ ညသန်းခေါင်မှာ Texas မြို့ကိုရောက်လာပြီး Lem ကိုရှာဖွေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Manfred ကတော့ သူတို့ဟာ အခြားအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ရောက်လာကြတယ်လို့ ထင်နေပါတယ်။ Joe ဟာ Taxes မြို့မှာရှိတဲ့ ငရဲကိုသွားတဲ့လမ်းအပေါ် သူ့ရဲ့သံသယတွေအကြောင်း Rev ကိုပြောပြနေပါတယ်……………. ဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုလိုက်ပါဦးခင်ဗျာ
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို ဘာသာပြန်ထားပေးတဲ့သူတွေကတော့ အစ်မကြီး လ၀န်းပြည့်နဲ့ ညီမလေး နီနီစိုးတို့ဖြစ်ပြီး
Sai Wunna မှ 1080p DTS ဖြင့် တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်…..
Episode 1 (1.06 GB)
GDrive NoFile Openload Onedrive
Episode2(1.07 GB)
Episode3(1.06 GB)
GDrive Megaup.net Openload Onedrive
Episode4(1.04 GB)
Episode5(1.06 GB)
GDrive Openload Onedrive
Episode6(1.04 GB)
Episode7(1.06 GB)
GDrive NoFile Onedrive Megaup.net
Episode 8 (1.06 GB)
Episode9(1.06 GB)
Episode 10 (1.05 GB)
ProductionDavid Janollari Entertainment, Hentemann Films, Universal Television
Firt air date2017-07-24
Last air date2018-12-28
Home PageMidnight, Texas Season 1
Blue Spring Ride (2014) [Complete]